Etazonia: Amerikana (Mena Hoditra) “Eny, mahavita izahay” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2009 18:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, Italiano, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, Español, srpski, English
Rehefa tsy taza-maso nandritra taonjato maro, dia miha-mitombo ny fampiasan’ny teratany Amerikana (Indiana mena hoditra) ao Etazonia ny blaogy sy ny gazetin'olom-pirenena antseraserao hampiroboroboany sy itehirizany ny zo sy ny fombafomba fiainan’izy ireo. Manana ny antony vaovao ho feno fanantenana ireo tompon-tany Indiana tamin’ny fifidianana an’I Filoha Awe Kooda Bilaxpak Kuuxshish (Anarana avy amin’ny foko Crow nomena an’I Barack obama ).
Reznet – mitatitra avy amin’ny vazimban'Amerikana.
Ny anaran'ny tetikasa iray manome fitenenana ny fomba fijerin’ny tompon-tany dia i Reznet, vaovaon’ny teratany Amerikana Indiana, tranokala firaiketana sy fialambolin’ny Anjerimanontolo ao amin’ny sekolin'ny fanaovan-gazety ao Montana, ary manofana sy manoro hevitra ny mpianatra Indiana (mena hoditra) Amerikana ao amin’ny anjerimanontolo manerana ny firenena raha toa ka mihevitra ny hanao gazety ry zareo.
Samy asongadin'ny Reznet na lahatsoratra, na bolongana sy ny haino aman-jery. Raha jerena ny haitao moderina eo amin’ny rafi-pinoana Indiana, indrindra fa ny fanajana ny tany, dia milaza ny lahatsoratra iray fa “hamokatra angovo madio ho an’ny governemanta amerikana ny orinasa iray tantanin'ireo tompon-tany (mena hoditra).
Blaogy hafa, ao amin’ny sokajy triBaLOG no manazava ny lazan'ny tsy filazalazan'ny fampahalalam-baovao tandrefana hanaovan'ny tale mena hoditra fanamby amin'ny alalan'ny fanaovana andian-drindran-tsary ahetsiketsika vaovao tahaka ny “Stories From the Seventh Fire” (tantara avy amin'ny Lelafo fahafito) manazava tsara ny fombafomban'ny foko araka ny tokony ho izy.
Rezkast - tranonkala fifampizarana hira sy lahatsary
Tranokala kelikely kokoa ny Rezkast, noforonin’ny Foiben'ny Haitaon'ny Foko Coeur d’Alene izay miezaka ny hanaparitaka amin'ny haino manajery ny hafatry ny teratany Amerikana Indiana (mena hoditra), izay mifaninana amin'ny YouTube. Maro amin’ireo horonantsary ifampizarana eto ireo no mikasika ny hetsiketsika, ny kolotsaina, ny teny ary ny ainga-panahy.
Eo amin’ny horonan-tsary hita amin’ny tranokala no miseho ilay hira malazan’I will.i.am, nalaina avy amin’ny lahatenin’I Obama, ary narindra ho hira mba hampisehoana ireo fiainan’ny Amerikana Indiana an-tsary vita ankehitriny sy vita fahagola. Mitanisa ny fanamby atrehin'ny Amerikana mena hoditra ilay horonantsary – toy ny hoe ny fiarovana ny toerana masina sy ny fikolokoloana ny kolotsaina fahagola – ary nofeheziny hoe “ Eny, Afa-mamerina ny halehiben'ny Foko izahay”